बढ्दो उमेरमा आमा बन्नुको फाइदा तथा बेफाइदाहरू | Yopoho Directory
बढ्दो उमेरमा आमा बन्नुको फाइदा तथा बेफाइदाहरू
आजको यस आधुनिक समयमा आमा बन्ने कुनै उमेर सीमित छैन । पहिले २४, २५ वर्षमा महिलाहरूले बच्चा जन्माउनु सही मानिन्थ्यो भने अहिले ३४, ३५ वर्षमा पनि महिलाहरूले स्वस्थ बच्चा जन्माई रहेका छन् । हिजोआज पढाई तथा करियरले गर्दा महिलाहरूले ढिलो बच्चा जन्माउन थालेका छन् । जसले गर्दा बढ्दो उमेरमा आमा बन्दा विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परेको छ भने अर्को तिर यसबाट केही फाइदाहरू पनि हुन्छ ।
आमाको आयु बढ्छ
विभिन्न अध्ययन अनुसार पत्ता लगेको छ कि जो महिला बढ्दो उमेरमा आमा बनिन्छन् , उनीहरू बढी परिपक्व हुन्छ । त्यसैले उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सतर्क र गम्भीर हुन्छन् । विशेष गरी उनीहरू गर्भावस्थाका क्रममा आफ्नो खानपिनमा विशेष ध्यान दिन्छन् , जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसबाट उनीहरूको आयु पनि बढ्छ ।
क्यान्सरको खतरा रहँदैन
२० वर्ष पछि बच्चा जन्माउने महिलाको तुलनामा ३० वर्ष पछि आमा बन्ने महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ ।
बच्चा स्वस्थ जन्मिन्छ
कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा बच्चामा विभिन्न कमी रहन जान्छ तर बढ्दो उमेरका महिलाले जन्माएको बच्चामा यस्तो खतराको सम्भावना कम हुन्छ किनकि उनीहरू विभिन्न रोगहरूबाट टाढा रहन्छन् जस्तै क्यान्सर ,हाइपरटेन्शन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले स्वस्थ बच्चा जन्माउँछन् ।
प्रायः बच्चा जन्माउने क्रममा आमाको मृत्यु हुने गर्छ । यस्तो समस्या प्रायः कम उमेरका महिलामा देखिने गर्छ । तर ३० कटेका महिलामा यस्तो समस्या देखिँदैन । अध्ययनकर्ताका अनुसार पनि ३० कटे पछि फेमिली प्लानिङ्ग गर्नुपर्छ । यसबाट आमा तथा बच्चा दुवै स्वस्थ र सुरक्षित रहन्छन् । साथै परिपक्व महिलाबाट जन्मेका बच्चा केही लामो र समझदार पनि हुन्छन् ।
प्रायः ४० वर्ष कटे पछि बच्चा जन्माउनु खतरनाक हुन सक्छ । केही कारणवश केही महिलाहरू ४० कटे पछि बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छन् । यसबाट निम्न बेफाइदाहरू हुने गर्छ ।
१. बढ्दो उमेर सँगै महिनावारी सुक्ने बेला पनि नजिकिँदै जान्छ । जसले महिलाको प्रजनन क्षमतालाई प्रभावित गर्छ ।
२. बढ्दो उमेरमा आमा बन्दा विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने सम्भावना रहन्छ जस्तै उच्च रक्तचाप ,तनाव, मधुमेह आदि ।३. ४० कटे पछि आमा बन्ने प्रयास गर्ने महिलाहरूलाई हृदयघात हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।४. यस उमेरमा बच्चा जन्माउँदा आमालाई मधुमेह हुन सक्छ र जन्मसँगै बच्चालाई केही रोगहरू पनि लाग्न सक्छ ।
५. ४० कटे पछि एक भन्दा बढी शिशु जन्मिने बढी सम्भावना हुन्छ ।
६. यस उमेरमा आमा र बच्चा दुवैको वा कुनै एकको प्रसवका क्रममा मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
Next: घरपालुवा बाख्राको अनौठो